Ezona 7 zilungileyo zomtshato zokusebenza ze-Android | I-Androidsis
Ezona zixhobo zisixhenxe zomtshato zilungileyo ze-Android
UAron Rivas | 26/03/2021 21:45 | Ukuhlaziywa ukuba 26/03/2021 21:53 | Ukusetyenziswa kwe-Android, Izixhobo ze-Android
Uninzi lwabantu bafuna ukudibana nomntu okhethekileyo emva kwexesha lokwazi kwaye, ngenxa yoku, kuhlala kuyinto eqhelekileyo ukuyenza into esesikweni. Asithethi ngobuhlobo okanye ubudlelwane, kodwa malunga nokuthandana, oku-ukuba uyalithanda- inyathelo eliphambi komtshato, isenzo esithi umanyano lwenziwe ngomtshato, into edla ngokudideka. isifundo sokulungiselela neminye imicimbi enxulumene noko.
Ngethamsanqa, kwabo bafuna ukuhlela umtshato, bakhona Usetyenziso oluninzi kwiVenkile yeGoogle yokuDlala ye-Android enziwe ukuba ifumaneke ukuze isebenze njengesixhobo soncedo embuthweni nasekucwangcisweni kwemitshato. Emva koko siza kudwelisa ezona zicelo zilungileyo zili-10, ezo, ukongeza, zisimahla.
Kule ndlela yokudibanisa uya kufumana ii -apps ezahlukeneyo, ukongeza ekuncedeni ukuba uququzelele umtshato wakho ofanelekileyo, uya kukunika ezinye izixhobo kunye nemisebenzi eyahlukeneyo yokuyila.
2 UZankyou-Uluhlu loMtshato kunye noMbutho woMtshato wakho
3 Uluhlu lokutshekisha kunye nohlahlo-lwabiwo mali nge-Wedbox
4 Weddi - Umcwangcisi womtshato kunye noluhlu lokutshekisha
5 I-MyWed-Umcwangcisi woMtshato wabafazi
6 Usuku Olukhulu-Ukubala ukuya kumtshato wakho
7 Amakhadi omtshato: uyilo lokuyila kunye nokunye
Siqala uluhlu ngesona sicelo sigqibeleleyo somtshato kwiVenkile yokudlala. Kwaye kunjalo Imitshato.net yinkqubo ekubonelela ngoncedo kumbutho phantse nawuphi na umba womtshato owuthandayo onawo engqondweni, ukwenza ucwangciso lube ngumsebenzi olula nongadibaniyo.
Kwabaqalayo, inikezela ngereferensi enamagama angaphezu kwama-50 amawaka abafowunelwa abancedisi kunye nabasebenzi phakathi kwabo abafoti, iintyatyambo kunye nokunye. Ikwanayo Imisebenzi yohlahlo-lwabiwo mali ekunceda ugcine ngcono iindleko zakho zomtshato. Kwelinye icala, izimemo kunye nokulungiswa kwetafile yeendwendwe nayo yinto onokuthi ucwangcise ngokulula ngakumbi kuyo Bodas.net.
Ukuba unamathandabuzo malunga nendlela ofuna ukuba ubonakale ngayo umtshato wakho, ukusuka kumhombiso ukuya kwisitayile sayo, esi sicelo sinecandelo apho unokukhuthazwa ukuyila. Uyakwazi ukubuyela kwizimvo kunye nezixhobo eziya kuthi ngokuqinisekileyo zihambelane nento onayo engqondweni. Ukongeza, inecandelo apho unokuqokelela khona iingcebiso kunye nezikhokelo ezahlukeneyo, kunye namava omtshakazi nomyeni kunye nezibini, kubaboneleli bemisitho kunye nombutho womtshato odweliswe kuhlelo lokusebenza.
Njengokuba oko kwakunganelanga, ikwabonelela ikhathalogu engaphezulu kwamawaka angama-20 iilokhwe zomtshato ezivela kubaqambi abaziwayo kwaye inyanga nganye i-5 i-euro iyabhalwa ngokuqesha okanye ngokundwendwela ababoneleli abafumanekayo ngokusebenzisa isicelo.
Umthuthukisi: Umcwangcisi woMtshato SL
UZankyou-Uluhlu loMtshato kunye noMbutho woMtshato wakho
UZankyou sesinye isicelo esihle kakhulu eso iya kukunceda uququzelele umtshato wakho ngokulula, ngokukhawuleza nangokulula, ukuba sisixhobo esifumanekayo kwinkqubo yokucwangcisa nokulawula iindwendwe kunye nokuhlela iitafile, neziqinisekiso zokuzimasa nezinye.
Ukuba ufuna ukuqesha abasebenzi abanamava ekucwangciseni nasekucwangciseni imitshato, Ulawulo lweenkampani kunye nababoneleli oza kuthi ubonge ngenxa yale app lubanzi kwaye luya kuhlangabezana neemfuno zakho, kunye nabancedisi abasusela kubathwebuli beefoto ukuya kubapheki. Ukongeza, kule ndawo uya kufumana iindawo ezifanelekileyo kunye neendawo zokurenta apho unokuqhuba khona umsitho womtshato.
Ngalesi sicelo uya kuba nayo Izikhokelo kunye namanqaku azakubonisa kwaye akuncede inyathelo ngenyathelo ngendlela yokwenza, ukuhlela nokulawula umtshato wakho, kunye neengcebiso ezinxulumene noko, izimvo onokuthi ukhuthazwe ngazo kuyilo lwazo kunye namanqaku aneendlela zamvanje zokulandela, ukuba ufuna ukuya kutshanje. Kukwakho nemisebenzi efana nokwenza uhlahlo-lwabiwo mali lomtshato, oluza kukunceda ugcine yonke into kwaye ugcine umkhondo wemali oza kuyisebenzisa kumbutho kunye nokwenza isivumelwano seenkonzo, kunye namacandelo okucebisa abalungisa iinwele kunye nendawo yokuhlala.
Ukuba ufuna uncedo oluthe kratya, unokucela neengcebiso ezenzelwe wena, ezisimahla kwaye ziya kukunceda ngayo yonke into. Ngaphandle kwamathandabuzo, yenye yezonaapp zigqibeleleyo zohlobo lwazo.
Uluhlu lokutshekisha kunye nohlahlo-lwabiwo mali nge-Wedbox
Ukuba ufuna ukuhlela izicwangciso zakho zomtshato ngokusebenzisa uluhlu lwezinto onokuzilawula ngokupheleleyo kwaye uzenze, ukugcina umkhondo wento osele uyenzile kunye nento engekhoyo kumsitho womtshato.
Kanjalo, Uhlelo lokusebenza olugqibeleleyo njengolu lubonelela ngomsebenzi ekuvumela ukuba ulawule iimali zakho kunye nohlahlo-lwabiwo mali lokudalwa kunye nokufezekiswa komtshato, ukongeza ekunikezeleni kulawulo olupheleleyo lokuzimasa iindwendwe zakho, ukuze wazi ukuba ngubani oza kuya okanye ongayi kumtshato wakho kwaye ngenxa yoko angafumani isimanga ngenxa yokungabikho okanye iindwendwe ezigqithileyo.
Into enomdla kakhulu yile nto eza nale sicelo ngumsebenzi ovumela isibini ukuba sithathe inxaxheba kwinkqubo, kunye nokuvumelanisa apho konke okwenziwe ngesi sicelo kuvunyelwe ukuba kuvele kwiselfowuni, ngayo yonke inkqubo eyenziweyo kwaye amanyathelo agqityiwe. Ngale ndlela nobabini niyakwazi ukuba ingakanani inkqubela phambili eniyenzileyo ekuququzeleleni umsitho, ngaphandle kokuhlaziya nantoni na ngesandla.
Unokusebenzisa Uluhlu lokutshekisha kunye nohlahlo-lwabiwo mali nge-Wedbox ukukhuthaza ngezimvo, iingcebiso kunye neengcebiso ezivela kwabanye oomolokazana ukuba ukhethe ababoneleli beenkonzo abafanelekileyo beprojekthi yakho.
Umthuthukisi: IiNkqubo zoMtshato zoMtshato
Weddi - Umcwangcisi womtshato kunye noluhlu lokutshekisha
Olu lolunye usetyenziso oluziveza njengomncedisi kumtshato wakho ofanelekileyo. Ngoluhlu lwakho lwemisebenzi onokuyidlala ukuyigqiba, inguwe oyichazayo kwaye uyenze; konke ukuze kugcinwe umkhondo wenkqubela phambili kunye nenkqubela phambili yamalungiselelo omsitho.
I-Weddi iveza phantse yonke imisebenzi echaziweyo kwezicelo ezichazwe apha ngasentla. Ngolu setyenziso uya kuba nalo uphawu lohlahlo-lwabiwo mali oluza kukunceda uhlale ngaphezulu kwento onokufikelela kuyo kwaye, emva koko, ahlawule yonke into esele icwangcisiwe kunye nekhontrakthi. Yintoni egqithisile, ikuvumela ukuba ulawule uluhlu lweendwendwe kwaye ufumane izixhobo zomtshakazi, phakathi kwezinye izinto.
Le yenye indlela egqwesileyo enedumela leenkwenkwezi ezi-4.5 kunye namawaka okhuphelo anyuka mihla le ngenxa yenkqubo enkulu yale app, ebonakaliswe kwizimvo ezilungileyo zabasebenzisi bayo.
Umthuthukisi: Imitshato kunye neeNkqubo zokusebenza
I-MyWed-Umcwangcisi woMtshato wabafazi
Ukucwangcisa nokulungiselela umtshato kulula nge-MyWed. Esi sicelo siphakathi kwezona zilungileyo kudidi lwazo, kwaye ayenzelwanga nto.
Kuza nayo yonke into oyifunayo ukwenza kube lula ukugcina yonke into ihlaziyiwe kumsitho womtshato, kuludwe lweendwendwe olulungiswe kakuhle nolucwangcisiweyo esinokuthi silawule yonke into ngalo, ukuba ngubani oza kuya kwabangayi, kunye noluhlu lweetafile onokuzihlela ngokwamaqela.
Into enomdla kwaye iluncedo kakhulu kukuba I-MyWed iya kukukhokela kwinkqubo yombutho, ndikuxelela ukuba kufanele ukwenze nini oko ukucebisile, ukuze ungalibali nantoni na kwaye ube nayo yonke into esexesheni. Kuza kunye necandelo lohlahlo-lwabiwo mali oluya kukunceda ukuba ungagqithi koko ubukuphakamisile ekuqaleni, into elungileyo kakhulu kubantu abaneemvakalelo zokuthenga ezigqithisileyo. Kwelinye icala, inomsebenzi wekhontraktha onokuthi ube nayo yonke idatha usondele kubo kwaye ubabize xa ufuna njalo.
Ukulinganiswa kwayo kweenkwenkwezi ezi-4.8 ngokusekwe phantse kwisigidi sokukhutshelwa kunye nangaphezulu kwama-8.500 amagqabantshintshi athi, ubukhulu becala, aqinisekile, ayenza ibe yenye yezona zixhobo zomtshato zibalaseleyo kwiVenkile yokuDlala nakule ingqokelela, ke akufuneki ungathandabuzi kuvavanyo. yiyo.
IsiCwangcisi soMtshato ❤️ Imisebenzi, iindwendwe, ukuvumelanisa
Umthuthukisi: IsiCwangciso soMtshato
Usuku Olukhulu-Ukubala ukuya kumtshato wakho
Ngaphandle kokuba sisicelo esikunika esisiseko nesifunekayo ukulungiselela umtshato wakho ofanelekileyo, yi inomsebenzi wokubala obala iintsuku, iiyure kunye nemizuzu eseleyo yolo suku lukhulu.
Phakathi kweempawu zayo ezibalaseleyo sifumana okuninzi esele kuchaziwe apha ngasentla kwezinye izicelo, ezinje ngomsebenzi wohlahlo olunceda ugcine nokugcina yonke into ngaphakathi kwento onokuyihlawula, uluhlu lweendwendwe, uluhlu lwezinto eziza kwenziwa kunye ne-ajenda lawula ngcono yonke imisebenzi ekufuneka uyenzile ukuze ube nayo yonke into esexesheni xa kufika ixesha
Umthuthukisi: Imitshato kaMarina Mazein
Amakhadi omtshato: uyilo lokuyila kunye nokunye
Okokugqibela, sinesinye isicelo somtshato esihle kakhulu esinaso ungenza amakhadi omtshato amahle kakhulu, nokuba umeme abo bantu ufuna ukuba bangene emtshatweni wakho okanye uvuyisane nomtshakazi nomyeni, phakathi kwezinye izinto.
Unokwenza kwaye wenze ngokwezifiso uyilo lwakho ngendlela othanda ngayo, ngezakhelo ezininzi kunye neefonti onokuthi uzongeze kumakhadi akho, ukuze zihlale njengoko ubuzicinga. Ukongeza, isicelo sikuvumela ukuba ungeze imifanekiso kunye neefoto kumakhadi.
Kwelinye icala, kunokwenzeka ukuba ufikelele kwiimpawu ezininzi kunye nobuso ukunika ukonwaba ngakumbi okanye uthando kumakhadi kwaye ubhale imiyalezo oyifunayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ezona zixhobo zisixhenxe zomtshato zilungileyo ze-Android
Ezona zilungileyo zokunxiba imidlalo ye-Android
Iimidlalo ezili-13 ezilungileyo kakhulu ezimbini